ဧရာဝတီတိုင်း မိန်းမလှကျွန်းပေါ်က ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံး မိကျောင်းကြီးများ အကြောင်း
[Zawgyi] ဧရာဝတီတိုင်း မိန်းမလှကျွန်းပေါ်က ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံး မိကျောင်းကြီးများ အကြောင်း မပြောချင်ပေမယ့်လည်း ပြောရဦးမယ်။ မိန်းမ လှကျွန်းဒေသမှာ မိကျောင်းတွေ ရှင်သန်ကျက်စားနေခဲ့တာ ဟိုး ပဝေဏသီ ကတည်းက သူ့ သဘာဝ အတိုင်းနေခဲ့ကြတာ။ နောက်ပိုင်းမှ လူနေထူထပ်ပြီး လူတွေကရောက်လာကြတာ။ မိကျောင်းဆိုတာ မိတ်လိုက်ချိန်ရှိတယ်။ဥဥချိန်ရှိတယ် ။ သားပေါက်ချိန် ရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်သားငှက်ဌာန ကလည်း ပညာပေး ဟောပြောပွဲတွေ မိတ်လိုက်ရာသီ March / April / May စကတည်းက ရွာတွေထိဆင်းပြီး ဟောပြော ပွဲလုပ်တယ်။ပုံမှန်ဆို ဧက ၃၃၇၇၉ ရှိ တဲ့ ဒီကျွန်းကြီးထဲမှာ သဘာဝက ပေးထားတဲ့ Ecosystem ကောင်းမွန်မှု့ကြောင့် …
WAVE MONEY ဆိုင်မှာ လိမ်ပုံလိမ်နည်းအသစ်နဲ့သွားလိမ်တဲ့သူ (အများသိအောင်မျှဝေပေးပါအုံးရှင်)
[Zawgyi] WAVE MONEY ဆိုင်မှာ လိမ်ပုံလိမ်နည်းအသစ်နဲ့သွားလိမ်တဲ့သူ (အများသိအောင်မျှဝေပေးပါအုံးရှင်) ဒီနေ့ကိုယ်တွေ့လေး တင်ပေးမယ်နော် အားလုံးလည်း သတိထားစေချင်ပါတယ် မိန်းမတယောက် ဒီနေ့ပိုက်ဆံ လာလွှဲတယ်။၁သောင်းခွဲ လျွှို့ဝှက်နံပါတ် သူ့ဟာ သူရိုက်မယ်ဆိုတော့ ‌ပေးရိုက်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ၁သောင်းခွဲကိုသုညတစ်လုံးထပ်တိုးလိုက်ပြီး ကျွန်မဆီကိုဖုန်းပြန်ပေးလို့ ကျွန်မက emoneyကြည့်တဲ့အခါမှာစက်ထဲမှာကျန်တဲ့emoneyက ကွာနေတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျမှ ကြည့်လိုက်တော့စက်ထဲက ထွက်သွားတာက တစ်သိန်းခွဲဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ကိုပြောတော့ ခြေလက်တွေ တုန်ပီးတော့ ကျွန်မလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး အကြောက် အကန်ငြင်းတယ် အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မကလည်း သူ့ကို အတင်းမ စွတ်စွဲသေးဘူး။ဟုတ်ပီ မှားလွှဲတဲ့ပိုက်ဆံ ကိုယ့်စက်ထဲက ကိုယ်ပြန်ထုတ်မ ယ်လို့လုပ်တဲ့ အချိန် သူက နေဦးကျွန်မဖုန်းကိုပြန်ကြည့်ပေးမယ်ဆိုပီး ပြေးထွက်သွား တယ် မှားလွှဲတဲ့ ပိုက်ဆံကိုလဲ …
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ တစ္ဆေ ( ၂ ) ကောင် ပန်းခြံထဲမှာ အားကစားလုပ်နေတာကို ဗီဒီယိုရိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရဲတွေရဲ့ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ)
[Zawgyi] ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ တစ္ဆေ ( ၂ ) ကောင် ပန်းခြံထဲမှာ အားကစားလုပ်နေတာကို ဗီဒီယိုရိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရဲတွေရဲ့ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ) အိန္ဒိယက ပန်းခြံတစ်ခုမှာ ညဘက်ကြီး အားကစားလုပ်နေတဲ့ တစ္စေ ၂ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရလို့ ရဲတွေက အဲ့အားသင့်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ လိုင်းပေါ်မှာကတော့ အဲ့ဒါက သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ပါလို့ လူတွေက ၀ိုင်းပြောနေကြပါတယ်။ညဖက်ရဲတွေ ကင်းလှည့်နေစဉ်မှာ ပန်ခြံအတွင်းမှာအားကစားလုပ်တဲ့ ပစ္စည်းကရိယာတွေက အသက်ဝင် လှုတ်ရှားနေလို့ ရဲတွေက ပန်းခြံထဲကို ၀င်ပြီး စစ်ဆေးနေစဉ်မှာပဲ အားကစားပစ္စည်း ၂ခုက လူတွေ လေ့ကျင့်ခန်း လာလုပ်နေသလို အသက်ဝင်နေပါတယ်။ သူတို့က အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး တွစ်တာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ …
သူမရဲ့​ဂေဟာလေး အောက်လမ်းနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာခံနေရကြောင်း ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
[Zawgyi] သူမရဲ့​ဂေဟာလေး အောက်လမ်းနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာခံနေရကြောင်း ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ပရဟိတမင်းသမီးလေးလို့ တင်စားရလောက်အောင် ကိုယ်ကျိုးမဖက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ စွမ်းစွမ်းတမံလိုက်လံကူညီတတ်သူ မင်းသမီးလေးခိုင်နှင်းဝေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်လာတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့ ဂေဟာလေးမှာ​ခေါ်ယူမွေးစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးလေးတွေရဲ့မိခင်အဖြစ်ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ခိုင်နှင်းဝေဟာသူမရဲ့ ဂေဟာလေးကို အောက်လမ်းနည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်နေသူတွေကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒီလိုအတိုက်အခိုက်တွေရှိနေကြောင်းကိုလည်းကျိုက်မရောဆရာတော်ကြီးထံသွားရောက်ဖူးမြော်ရင်း သိခဲ့ရတယ်လို့ ခိုင်နှင်းဝေကဆိုပါတယ်။ မနေ့က ကျိုက်မရောဆရာတော်ကြီး ထံသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ရင်း ဂေဟာ မှာအတိုက်အခိုက် အတားအဆီးအနှောက်အယှက်တွေရှိနေတယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားပြီး ​ဂေဟာကိုလာစစ်ပေးဖို့ ဒီနေ့ပဲ ဆရာတော်ကျောင်းက အဘ တယောက်ကို ပင့်ဖိတ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တော့ အဘက အာရုံပြုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဂေဟာရှေ့က ရွက်လှပင်အောက်မှာ ရှိတယ်လို့မိန့်တော့ကျမတို့ ချက်ချင်း ဆယ်ယူကြည့်တဲ့အခါ တကယ်ပဲအင်းပြားတွေ တွေ့လိုက်ပါတယ်ရှင်၊ အဲဒီအင်းပြားက လူသေကောင်တွေမှာပတ်တဲ့အဝတ်စ ပိတ်ဖြူနဲ့လုပ်ထားတာတဲ့ ကျမ ကလေးတွေအတွက်တော့ …
JACK MA ရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ အောင်မြင်ရေး နည်းလမ်းများ
[Zawgyi] JACK MA ရဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ အောင်မြင်ရေး နည်းလမ်းများ ၁ – မိမိ ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း များကို အမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် ရှာဖွေပါ။ ၂ – ဖွင့်ထားသော တံခါး တစ်ချပ်လို အခွင့်အလမ်း မှန်သမျှကို လက်ခံကြိုဆိုပါ။ ၃ – အရာရာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိအောင် ကြိုးစားရမည်။ ၄ – မိမိ လုပ်ဆောင်ချက် တိုင်း လျင်မြန်နေရမည်။ ၅ – လက်ရှိ မိမိ ရဲ့အခြေအနေထက် နောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်စွမ်းရှိတာကို မှန်းဆရမည်။ ၆ – မိမိ ၏ ရည်မှန်းချက်မပျောက်ပါစေနှင့်။ ၇ – ရဲဝံ့စွာ …
ဂန္ဓီပြောတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းသော သူတော်ကောင်း ( ၇ )ယောက်
[Zawgyi] ဂန္ဓီပြောတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းသော သူတော်ကောင်း ( ၇ ) ယောက် (၁) အလုပ်မလုပ်ဘဲ ချမ်းသာနေတဲ့ သူ (၂) အကောင်းအဆိုး အကျိုးအပြစ် မခွဲခြားတတ်ဘဲ ပျော်ရွှင်နေသူ (၃) ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘဲ ဉာဏ်ပညာရှိဟန်ဆောင်သူ (၄) လူ့ကျင့်ဝတ်တွေ မရှိဘဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ (၅) လူ့တွေအကြောင်း မသိတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များ (၆) စွန့်လွှတ်ခြင်း မရှိခြင်း ဘာသာရေး အယူဝါဒ သမားများ (၇) အခြေခံ သဘောတရားများကို မသိရှိဘဲ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်များ Credit ရိုးရာလေး [Unicode] ဂန်ဓီပွောတဲ့ ကွောကျစရာကောငျးသော သူတျောကောငျး ( ၇ …
“ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ကံကောင်းလိမ့်မယ် ”
[Zawgyi] “ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ကံကောင်းလိမ့်မယ် ” ကျွန်တော် အလုပ်မနားရဲဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့မှာစုထားတဲ့ငွေမရှိလို့ပဲ။ကျွန်တော်ပင်ပန်းတယ်လို့ မပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် လုပ်လက်စ အလုပ်တွေမပြီးသေးလို့ပဲ။ကျွန်တော်အပျင်းမကြီးရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ထက်သာတဲ့သူတွေတောင် ကျိုးစား နေကြဆဲမို့ပါ။ကျွန်တော်မှာ ရွေးစရာလမ်းတွေ အများကြီး ဒါပေမဲ့ ရွေးပြီး သားလမ်းကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မပစ်ဘူး။ ဘယ်သူဘယ်လောက်ပဲ ကျွန်တော်ကိုမကောင်းဘူးပြောပြော အချိန်တန်တော့သူ့ ဖာသာသူ နားလည်သွားပါလိမ့်မယ် စိတ်ထဲမှာ လာထည့်ထား နေစရာမလို ပါဘူး။ကိုယ်ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ အကြွေးမတင်ရင်တော်ပါ ပြီ။စိတ်အေးအေး ထားတက်အောင်ကြိုးစားပါ။လူ့ဘဝဆိုတာ အတက်ရှိသလို အဆင်းလဲရှိ တတ်ပါတယ်။သူများတွေကို လိုက်ပြီး ကဲ့ရဲ့နေစရာလဲ မလိုပါဘူး ဘဝကပေးတဲ့သင်္ခန်းစာ တွေကိုကြေညှက်လေလေ ကိုယ်က ကံကောင်းလေလေပါပဲ။ လူ့လောကကြီးမှာ ဘယ်အလုပ်မှ မပင်ပန်းဘူးဆိုတာ …
ခံစားခွင့်နှင့် အချိန် ..! (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၃ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား )
[Zawgyi] ခံစားခွင့်နှင့် အချိန် ..! (အရမ်းကောင်းလို့ အချိန် ၃ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား ) တစ်ခါက.. တောဘုရင် ခြင်္သေ့မင်းကြီး တစ်ကောင်ရှိပါသတဲ့..။ သူ့မှာ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တာဝန်ကျေတဲ့ လူယုံတော်တစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။ သူကတော့ ရှဉ့်တစ်ကောင်ပဲဖြစ်တယ်။ရှဉ့်ကလေး ဟာ ခြင်္သေ့မင်းကြီးခိုင်းသမျှကို မညဉ်းမညူဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိတယ်။အဲဒီလို ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာလည်း.. မြန်မြန်ပြီးတဲ့အပြင် အမှားအယွင်းမရှိသလောက်လည်း နည်းပါးတာကြောင့် ခြင်္သေ့မင်းကြီးက အင်မတန်မှပဲသဘောကျတယ်..။ ဒါကြောင့်လည်း ခြင်္သေ့မင်းကြီး က ရှဉ့်ကလေး ကို ဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီး ဒီလိုပြောတယ်..“မင်းဟာ အင်မတန်တော်တဲ့ ကျေးကျွန် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တော်အင်မတန် သဘောတော်ကျသကွဲ့..။ ဒါကြောင့်လည်း.. မောင်မင်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လို့ အငြိမ်းစားယူတဲ့အခါမှာတော့.. လှည်းတစ်စီးတိုက်ရှိတဲ့ မက်မွန်သီးတွေကို ဆုတော်လာဘ်တော်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုပေးမယ်လို့ …
အိပ်ရေးပျက်ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်း မောပန်းနေသူတွေ ချက်ခြင်းလန်းဆန်းစေတဲ့ဆေးတစ်ခွက်
[Zawgyi] အိပ်ရေးပျက်ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်း မောပန်းနေသူတွေ ချက်ခြင်းလန်းဆန်းစေတဲ့ ဆေးတစ်ခွက် အားအင်ကုန်ခမ်းမော ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်် မူးဝေခြင်းကို သက်သာ ‌ပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်း ‌ဆေးတစ်ခွက်”၊ အလုပ် ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အားအင် ကုန်ခမ်းလိုိ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ သက်သာ ‌ပျောက်ကင်းစေတဲ့‌။ ဆေးနည်း တစ်လက်ကို မျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင် ပစ္စည်းတွေကတော့-(၁) ကြက်ဥ အစိမ်းတစ်လုံး (မည်သည့်ကြက်ဥမဆို) (၂) သံပုရာသီး အမှည့်တစ်လုံး ၊(၃) သကြားဖြူ ဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း တို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။ သံပုရာအစေ့တွေ ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ပါဝင် ပစ္စည်းအားလုံကို သေချာအောင် နှံ့နှံ့စပ်စပ် ‌ရောမွှေပြီးသောက်ပေးရင် အမောအပန်းပြေပြီး အားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းက ကျွန်တော့်ဖခင် ‌ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် …
မိုးရာသီမှာ အဝတ်စိုတွေကို အနံ့မနံအောင် လျှော်နည်း
[Zawgyi] မိုးရာသီမှာ အဝတ်စိုတွေကို အနံ့မနံအောင် လျှော်နည်း အ၀တ်များကို လျှော်တော့မည်ဆိုလျှင် မလျှော်ခင် အ၀တ်များကို ရေနွေး၊ ဆား၊ ရှာလကာရည် (သို့) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ(Breaking soda) တို့ဖြင့် နာရီဝက်ခန့်စိမ်ပါ။နာရီဝက်ခန့်စိမ်ပြီးပါက အမွှေးဆီ၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် အ၀တ်လျှော်စက် (သို့) လက်ဖြင့်လျှော်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေကို ပြောင်စင်အောင်ညှစ်ပါ။အ၀တ်စိုများကို အ၀တ်ခြောက်စက်ဖြင့် တစ်အခါတည်း အခြောက်ခံပါ။ ဒါမှမဟုတ် နေပူသည့်နေရာမှာ လှန်းပါ။ နေမထွက်လျှင်(သို့)အိမ်ထဲမှာလှန်းလျှင် တစ်ထည်နှင့် တစ်ထည်မထပ်အောင် အရမ်းကပ်မနေအောင် ချိတ်ဖြင့်သေချာလှန်းပါ။အ၀တ်များခြောက်သွားပြီဆိုလျှင် မီးပူတိုက်ပေးပါ။အထက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ အ၀တ်များကို လျှော်ဖွတ်မည်ဆိုရင်တော့မိုးရာသီဖြစ်ပေမယ့် မှိုနံ့ကင်းစင်ပြီး မွှေးပျံ့သော အ၀တ်များကို ၀တ်ဆင်နိုင်ပါမယ်။ အထက်ပါအချက်တွေက မိတ်ဆွေအတွက်လွယ်ပေမဲ့ တကယ်ထိရောက်တဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်မှာပါ။ မိတ်ဆွေအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်သင့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Share ပေးလိုက်ဦးနော်။ …
This Year : 253833
Total Users : 548966
Total views : 2448533